ko htike's prosaic collection: မတရားတာကို ခေါင်းငုံ မခံတဲ့ စိတ် (သို့) မင်းကိုနိုင်
မတရားတာကို ခေါင်းငုံ မခံတဲ့ စိတ် (သို့) မင်းကိုနိုင်
ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောသွားတဲ့ မတရားတာကို ခေါင်းငုံ မခံတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေ ငါတို့ သွေးထဲမှာ လှည့်ပတ် စီးဆင်းနေပြီး မတရားမှုတွေကို ကျူးလွန်နေတဲ့ နအဖရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အောင်ပွဲရသည်အထိ တော်လှန်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ နအဖ အနေနဲ့ မတရားတဲ့ အခြေခံဥပေဒေကို အောက်လမ်းနည်းသုံး အနိုင်ရအောင် အတည်ပြုပြီးနောက် ဆက်လက်ပြီး ၂၀၁၀ မှာ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကို ဆက်လက် လုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အားလုံး သိနေပြီးသားပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ နအဖကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စိန်ခေါ်ဖို့ လိုအပ်နေသလို၊ စိန်ခေါ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ စကားပြောနေတာတွေ၊ .... ကုလသမဂ္ဂလို အဖွဲ့တွေကို အားကိုးနေတာတွေ၊ ..... နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးကို တင်မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဲ့တဲ့ စကားတွေကို ပြောနေမယ့်အစား လက်တွေ့ကျကျ ရတဲ့နေရာကနေ စတင်တိုက်ခိုက်တော်လှန်ဖို့ လိုနေပြီဆိုတာကို သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခုံရုံးကနေ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ တရားမျှတမှုတို့၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာတို့ကို ရယူပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အမှန်ကို သိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ သူတို့ အများဆုံး လုပ်ပေးနိုင်တာ “ဖိအား”ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး တစ်လုံးထက် ဘာမှ ပိုလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အောင်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်ယူရမှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာက ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် အမှားတွေကို ပြည်သူတွေကို မပေးစေလိုတော့ပါဘူး။
မတရားမှုကို ခေါင်းငုံ မခံတဲ့ စိတ်ဓါတ် ပြည်သူတိုင်း မွေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာပဲ နအဖ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ နောက်လိုက် တစ်စုကို ဒီနေရာကနေ စကားတစ်ခွန်းပြောပါရစေ။ “ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက် ကလိန်ကျကျ၊ ဘယ်လို အနိုင်ယူယူ၊ ... တရားမျှတမှု မရှိသ၍ ကျုပ်တို့က အသိအမှတ် မပြုသလို၊ ကျုပ်တို့ အနိုင်ရတဲ့ အထိ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေမယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရန်သူဟာ ပြည်သူ၊ ကျောင်းသား၊ သံဃာဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ ..... ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မတရား လုပ်ရပ်တွေဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရန်သူ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ နားလည်ထားရမယ်။ ခင်းဗျားတို့ရဲ့ မတရားတဲ့ လုပ်ရပ် တွေက ခင်ဗျားတို့ကို ထာဝရ ခြောက်လှန့်နေမှာ ဖြစ်တယ်” ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိလာစေရမယ်။
နအဖ မတရားလုပ်တာတွေကို သိရက်နဲ့ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး အဲဒီဘက်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ကစားကွက်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ အတွေးအခေါ် သမားတွေကိုလည်း ဒီနေရာကနေ ပြည်သူ့ ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး တိုက်ခိုက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
မတရားတာကို ဘယ်တော့မှ ခေါင်းငုံ ခံနေမှာ မဟုတ်ဘူး။
I just copied from "C Box"..
16 Jul 08, 05:26
ဆရာရယ်: ဆရာကိုထိုက်ခင်ဗျား နွားကြီးဆိုသောဝတ္ထု ဆန်ဆန် ပုံပြင်လေးသည် မဆလ ခေတ်က ဗိုလ်မှူးသော်က (တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ ရေးသားသူ)ပြောခဲ့ဖူးသော ဟာသလေးဖြစ်ပါသည် ။ နေ၀င်း ကို စန်းယုနှင့်မောင်မောင်ခ ခေါ်လာသည့်ပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကိုထိုက်ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ဆိုရင်တော့ သေသွားနှင့်ပြီဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးသော်က တယောက် သူခိုးသာလျှင်ဖြစ်ပေတော့မည် ဟု မှတ်ချက်ချလိုက်ရပါသည် (မှတ်ချက်။ ။ ဗိုလ်မှူးေ
16 July 2008 07:32
အဲဒီရီစရာ အတိုလေးရဲ့ အပေါ်ဆုံးက စာကို သေချာ ပြန်ဖတ်ပါဦး၊ ခင်ဗျား စာဖတ်တက်မယ် ဆိုရင်ပေါ့။ ကိုထိုက်က သူခိုးဆိုတာ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်သလားဆိုတာ၊ အရှက်တရား နည်းနည်းထားပြီးမှ သူများကို ဝေဖန်ပါ။ မဆလ ခေတ်မှာ ကြံဖွတ် မရှိတာကြောင့် ဒီစာကို နအဖ လက်ထက်မှာမှရေးတယ် ဆိုတာ သေချာတယ်။ နောက်ပြီး ကိုထိုက်က အစ အဆုံး သူ စိတ်ကူးပြီးရေးတယ်လို့ မပြောထားဘူး။ ကြားဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ခုကို ရေးထားတာပါလို့ သူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားတာ အသိသာကြီးပါ။
(cbox မှာ comment ရေးသောသူကို ဆိုလိုပါသည်။ copy ပြန်ကူးသော လူကို မဆိုလိုပါ။)
Yes, we all myanmar has responsibility to fight against NaAhFa. But You should not say that prosecuting them in ICC is useless. We must use all possible ways to reach destination as shortest as possible.
....သေလိုက်....Demo crap...Advantages Takers..
16 July 2008 at 16:33
funny thing about our fucking myanmar people!
let alone fighting back SPDC and taking over the power, here at this moment they can not be united and even try to do some cunning things to each other.
havealook at moe-thee-zun blog, that bitch doesnt think of helping ko-htike out and even postedastory that you bunch were arguing about.
military junta = demo-crap
neither is good for country! fuck off!!
hey, blue ... who is good? are you good?
yes... i think, you are the best. Hahahah
This is notaplay ground for someone like you kid. Go and play with other kids, bring Mr/Ms limit around with you too.
well, ..... it is good, that ko moe thee posted that story. people can read original story. Many people don't know about the old story from Nay win regime.
Now he post it, people can read it. Good......
Even ko htike told me that now he know the true story where it's come from. he said, .. he only heard that story when he was young from someone older than him. that's why he made it up with new story.
16 July 2008 20:20
If you don't know the proper "story" don't make it up..Lada...Prepare carefully before you make it...and no more excuse like.."he was young from someone older than him.that's why he made it up with new story"...blahhh...blahhh...You bloody "Demo crap"...go to bloody "Hell" with "SPDC"
16 July 2008 at 20:46
now you have grown upabit, but still, it is not right time for you to talk in here,
Go and play at play-ground.
typical refugee behavior and response, huh? i expected that.. B)
keep it up, it is fun seeing you taking like that !! B)
....I agreed with you "blue",,,hee hee...:P
.....typical low life "refugee behavior & response"...a het...:D...poor "minthant"